Famadihana. Isanny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagas
ⓘ Famadihana. Isanny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny f amadihana, izay antsoina koa hoe famonosan-damba. Ny famadihana dia fety atokanny Malagasy ha ..
Ny olikaratra dia vondrona fela elektirônika mifandray matetika aminny alàlanny olikaratra voatonta ary ny tanjony dia manao asa iray. Izay ny antony iheverina ny olikaratra fa boaty maintsy misy: Fidiranny aratra famelomana azy, Fivoahana tokana na maro. Fidirana tokana na maro, Matetika, ny olikaratra dia tohizinny sistema elektirômekanika mba afahana mampiasa na mijery ny valinny fanodinana. Ny felanny olikaratra dia matetika atao eo amboninny zavatra tsy mampita aratra bakelita misy ny mpampita aratra, olikaratra voatonta, sy/na voavondrona anaty olika voafintina anaty.